Somaliland oo ogolaatay in dib loo furo isku-socodka dadweeynaha Labada dhinac | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Somaliland oo ogolaatay in dib loo furo isku-socodka dadweeynaha Labada dhinac
Somaliland oo ogolaatay in dib loo furo isku-socodka dadweeynaha Labada dhinac
Maamulka Somaliland, ayaa ogolaaday in aan la carqaladayn isku socodka dadweynaha gobollada Waqooyi Galbeed ee la baxay Somaliland iyo gobollada kale ee Soomaaliya.
Qodob kamid ah Heshiiskii dowladda Federaalka iyo Somaliland ku gaareen waddanka Jabuuti, ayaa lagu sheegay in labada dhinac ku heshiiyeen in aan carqaladayn isku socodka dadweynaha iyo xiriirka bulsho midna.
Isu-socodka la xiriira dhaqanka, Waxbarashada, Ciyaaraha iyo Ganacsiga ayaa lagu heshiiyay in aysan dhinacna carqaladayn, si loo xoojiyo nabadda iyo wada-hadalka u dhexeeya dowladda Federaalka iyo maamulka Somaliland.
Balse, Somaliland waxay si cad sheegtay in aysan ogolayn dhammaan wixii siyaasad la xiriira, waxaana ay diidday in dib loo furo isu-socodka siyaasiyiiinta labada dhinac oo xayirnaa tan iyo markii Somaliland sheegatay in ay dalka intiisa kale ka go’day 1991-dii.
Maqaal horeRs’iisal wasaare Kheyre oo la kulmay guddiga qaban qaabada xuska todobaadka xoriyadda
Maqaal XigaCiidamada Haramcad oo howlgal ka fuliyay duleedka Balad Xaawo